१९ बर्षको उमेरमा पेले, रोनाल्डो, मेसी, म्याराडोनाका अगाडी कहाँ उभिएका छन् त एम्बाप्पे ? – Khel Dainik
१९ बर्षको उमेरमा पेले, रोनाल्डो, मेसी, म्याराडोनाका अगाडी कहाँ उभिएका छन् त एम्बाप्पे ?
एजेन्सी । जारी रसिया विश्वकपमा फ्रान्सका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका १९ बर्षिय किलियन एम्बाप्पे विश्वकपको २१ औं संस्करणमा ठूला स्टारका रुपमा उदाएका छन् । सेमिफाइनलमा बेल्जियमविरुद्ध पनि एम्बाप्पेको प्रदर्शन दमदार थियो र फ्रान्सलाई फाइनलमा पुराउन उनको भूमिका पनि महत्वपूर्ण थियो ।
एम्बाप्पेलाई भविष्यको सुपरस्टारका रुपमा हेरिएको छ । तर १९ बर्षको उमेरमा रोनाल्डो, मेसी, पेले, म्याराडोनाको अगाडी उनी एम्बाप्पे कहाँ उभिएका छन् त ? आउनुहोस् चर्चा गरौं ।
ब्राजिलियन लिजेण्ड पेलेले केवल १५ बर्षको उमेरमा आफ्नो व्यवसायीक करियर शुरु गरेका थिए । साथै मात्र १६ बर्षको उमेरमा ब्राजीलको राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउन सफल भएका थिए । उनले १७ बर्षको उमेरमा पहिलो विश्वकप खेलेका थिए र ब्राजीलको जितमा ६ गोल समेत गरेका थिए । पेलेले १९ बर्षको उमेरमा दुईपटक पाउलिस्टा र साओ पाउलो प्रतियोगिताको उपाधि जितिसकेका थिए ।
एम्बाप्पेको उमेरमा अर्जेन्टिनी लिजेण्ड डिएगो अरमान्डो म्याराडोना अर्जेन्टिनाको एक जुनियर क्लबमा आवद्ध थिए । उनले १६ बर्षको उमेरमा आफ्नो प्रफेशनल डेब्यु गरेका थिए । म्याराडोनाले राष्ट्रिय टोलीमा पनि छिटै डेब्यु गरेका थिए तर सन् १९७८ को विश्वकपमा तत्कालिन अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक सेजार लुईस मेनोट्टीले म्याराडोनालाई अर्जेन्टिनी टोलीमा समावेश गरेनन् । यद्यपि अण्डर–१९ वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा उनले ६ गोल गरे र प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी समेत घोषित भए ।
अर्जेन्टिनी स्टार जुन दिन १९ बर्ष पुगेका थिए, त्यतिबेला उनले सन् २००६ को जर्मनीमा जारी विश्वकपतर्फ मेक्सिकोविरुद्ध खेलिरहेका थिए । जर्मनीमा उनले अर्जेन्टिनाका लागि पाँच म्याच खेले तर अधिकांश समय उनी बेन्च मै रहन पुगे । क्लब लेभलमा भने मेसीले दुई स्पेनीस लिग उपाधि र एक च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेका थिए ।
पोर्चुगिज स्टार रोनाल्डोले १९ बर्षको उमेरमा पोर्चुगलका लागि सन् २००४ को युरो च्याम्पियनसिपका रुपमा मुख्य प्रतियोगिता खेलेका थिए । त्यतिबेला उनले प्रतियोगिताको ६ म्याच खेल्न सफल भएका थिए । यस प्रतियोगितामा पोर्चुगल फाइनलमा ग्रीससँग पराजित हुन पुगेको थियो । रोनाल्डोले यो म्याचमा पोर्चुगलका लागि पहिलो गोल समेत गरेका थिए । क्लब लेभलमा भने उनले म्यानचेष्टर युनाइटेडका लागि एक प्रिमियर लिग सिजन खेलेका थिए ।
ब्राजिलियन स्टार नेमारले १९ बर्षको उमेरमा सान्तोष क्लबका लागि खेलिरहेका थिए । साथै उनले सान्तोषलाई सन् २०११ मा कोपा डी ब्राजील र प्रतिष्ठित कोपा लिबर्टाडोर्सको उपाधि समेत जिताएका थिए । त्यसको एक बर्षपछि उनले ब्राजीलको राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु गरेका थिए र अमेरिकाविरुद्धको मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचमा गोल समेत गरेका थिए । १९ बर्षको उमेरमा उनी सन्तानको पिता समेत भईसकेका थिए ।
← अफिशियल : फुलह्याममा आवद्ध भए आर्सनल र चेल्सी टार्गेट ‘अफ्रिकन जाभी’ बार्सिलोनाले चेल्सीको स्टार विंगरका लागि गर्यो दोस्रो बिड →